प्रचण्डका लागि ओलीभन्दा झन् कडा बनेर निस्किए भीम रावल, एउटै प्रश्नले हल्लियो खुमलटार ! – 24updatemedia
प्रचण्डका लागि ओलीभन्दा झन् कडा बनेर निस्किए भीम रावल, एउटै प्रश्नले हल्लियो खुमलटार !
काठमाडौं, कात्तिक १९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डा। भीम रावलले कडा प्रश्न सोधेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पठाएको गोप्य पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
आज नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता डा. रावलले भने, “यो सत्ताका निम्ति खतरानाक सौदाबाजी हो । सार्वभौम संसद् र जनताको अपमान हो । विदेशीको नांगो चाकडी हो । प्रधानमन्त्रीले जलवायु सम्मेलनजस्तो महत्त्वपूर्ण मञ्चमा जाँदा एमसीसीका कार्यकारी अध्यक्षसँग लम्पसार परेका छन्, घुँडा टेकेका छन् ।”
डा. रावलले देउवा र प्रचण्डले छुट्टाछुट्टै हो कि संयुक्त रुपमा पत्र पठाएको भन्ने प्रश्न गर्दै यो राष्ट्रघाती र गैरजिम्मेवार पत्र भएको आरोप लगाए । उनले भने, “प्रचण्ड हाम्रो मुलुकको जलस्रोत मन्त्री हुन् कि परराष्ट्र मन्त्री हुन् ? संयुक्त रुपमा पत्राचार गरेको हो भने यो राज्यको उपहास हो । यो ज्यादै लज्जाजनक छ । संवैधानिक, कूटनीतिक र राज्य सञ्चालनका मर्यादा विरोधी कुरा हो । के प्रचण्डको राजनीति एमसीसीको फल खाएर केही थान मन्त्री र प्रधानमन्त्री खाने मात्रै हो ?”
एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले एमसीसी पारित गर्न चाहेको हो भने त्यो जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा भएको बताए । उनले भने, “माधव नेपालकै पार्टीका नेता झलनाथ खनाल नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख हुँदा एमसीसी अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । त्यसले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । अब झलनाथजीले कसरी मान्नुहोला ?”
सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक दल विभाजन र अदालतमा कचिंगल बढाउने धन्दा चलाउनु व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको प्रमाणित भएको उनको आरोप छ । उनले भने, “राष्ट्रघाती नेताहरुका कारण गण्डकी गयो, कोसी गयो, महाकाली गयो, माथिल्लो कर्णाली गयो ।
अब नेपाल उपनिवेशीकरणको बाटोमा छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको रणमैदान बनाउने षड्यन्त्रको हतियार एमसीसी पारित गर्छु भन्नु कानुनको ‘क’ र राजनीतिको ‘र’ नजान्ने मानिसले भन्ने कुरा हो ।”
Previous निकै दु:खदायी खबर : घरमा आगलागी हुँदा भाइ टिका लगाउन घरमा आएकी दिदि, बुबा, श्रीमती र छाेराको मृत्यु।
Next बुवा बितेपछि आमाले पनि छोडेर अन्तै हिडिन्, १४ वर्षकी संगीताले यसरी सम्हाल्छिन् घरपरिवार